Somalia:Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya oo la kuomey dhigiisa dalka Imaaraadka Carabta
Home Somali News Somalia:Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya oo la kuomey dhigiisa dalka Imaaraadka Carabta
Wasiirka Arrimaha Dibedda & Dhiirigelinta Maalgeshiga Dr Abdusalam Omer Hadliye ayaa maanta kulan la qaatay Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Dalka Iskutagga Imaaraadka Carabta H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, waxaana goobjoog ahaa Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta Mudane Cabdulqaadir Sheikhey Al-Hatimi.
Labada wasiir ayaa ka wada hadlay xoojinta cilaaqaadka labada dal, isla markaasna ay sheegeen in labada dal uu cilaaqaad wallaaltinimo ah oo fog oo taariikh leh uu ka dhaxeeyo. Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya Dr Abdusalam Omer Hadliye ayaa uga mahadcleiyey dhigiisa sida ay Dowladda Iskutagga Imaaraadka Carabta ay u taageerto Soomaaliya oo ay mashaariic fara badan ka fuliso dalka oo dhan, isla markaasna dhanka gar-gaarka bani’aadanimo ay si wallaaltinimo ah u garab taagantahay Soomaaliya.
Wasiir Abdusalam Hadliye ayaa sheegay in loo baahan yahay in labada dal ay ka wada shaqeeyaan arrimaha amniga, burcad-badeeda, iyo sidii ganacsatada Soomaaliyeed loogu dhiiri gelin lahaa fursadaha ganacsiga. Wasiirka ayaa uga mahadceliyey dowladda UAE u gurmadka qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii Central Hotel oo weli lagu dhabiibayo dhaawacyadooda dalka UAE. Labada mas’uul ayaa ka wada hadlay sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka iyo wadashaqeynta dhan walba ah leh.
Somalia: International partners and neighboring states influence exacerbate AU mission in Somalia, new reports say
Maraykanka oo maxkamadeenaya haweenay uu ka dhintay hogaamiye ka tirsanaa ISIS